Nlele / nlegharị Korea na nyocha / nlegharị Korea njem nyocha / Etourism Korea
Anyị chọrọ ikele nkwado maka njem anyị, ihe niile gara nke ọma, anyị enwetakwa ezigbo nlebara anya site na ndị ndu, ọkachasị n'aka Ms Kim, na - enwekarị obi ụtọ ma kpachara anya banyere nkọwa niile, ọ bụ onye ndu kachasị mma na Mr John nwekwara ndidi na anyi
Daalụ maka ịkwado ma nye anyị ohere ịnụ ụtọ ọnụnọ nke obodo gị
Etour akachapụrụ anya ihe niile anyị tụrụ anya tupu ya abịa South Korea. Atụmatụ na nhazi nke Ọha a haziri ahazi zuru oke ma ndị ọkwọ ụgbọ / ntuziaka na-abịakarị n'oge. Ọ Joyụ dịkwa obi ebere ma na-enyere aka, na-aza ozi anyị niile ma nyere aka ịrịọ ngwa ngwa.
Ntụziaka ndị njem anyị nyere anyị mere nnukwu ọrụ. Maazị Kevin na Seoul, Oriakụ Kim na Jeju na Hyoung Hwa na Busan-Gyeongju-Daegu nyere anyị nnukwu oge ga-adịgide n'ime obi anyị. Ndị ọkwọ ụgbọala ahụ nwere obi ọma ma dịkwa nchebe.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ileta obodo a ma nwee ọ itụ zuru ezu, anyị na-akwado gị ka ịkpọtụrụ Etour. Ha ga-eso gị rụọ ọrụ iji mepụta ahụmịhe kachasị mma na dịka m kwuru na mbụ, ha ga-adị mfe karịa ka ị tụrụ anya!
Ps. Anyị hụrụ ọkacha mmasị na etu ndị ndu niile si dị obi ebere inye anyị nọmba ekwentị ha ka anyị wee kpọọ ha mgbe ọ bụla anyị nwere nsogbu ma ọ bụ na anyị amaghị ihe anyị ga-eme n'otu ọnọdụ (ọkachasị metụtara asụsụ).
Nwere ọmarịcha ezumike South Korea nke eTour haziri. Site na Incheon ruo mgbe anyị laghachiri na Incheon 9 ụbọchị ka e mechara, ndị ọrụ niile nke eTour lekọtara anyị nke ọma. Vzọ ndị a na-eji eme ihe maka ebe a na-ebugharị ya na njem dị ọcha ma dị mma. Ndị ọkwọ ụgbọala ahụ kwanyeere anyị nke ọma ma mee ka anyị nwee mmetụta nke ọma na njem anyị na ịnya ụgbọ ala ha pụrụ iche. A gọziri agọzi anyị inwe Kevin dịka onye ndu anyị na Seoul na Nick dịka onye ndu anyị na Gyeongju na Busan. N’ihe niile a na-eme njem ahụ, Joy nọgidere na-ezite anyị ma na-eleru anyị anya iji mata otú anyị si eme. Ọ alsoụ Joy chọpụtakwara na a na-agwa anyị ihe niile banyere ụbọchị ọ bụla nakwa na anyị anaghị agbaghara ụgbọ oloko anyị ma mara ebe anyị ga-ezute ndị ọrụ.
Ndi otu anyi nke 9 bu otutu ndi mmadu mejuputara nke ndi ezin’ulo ha n’agbago 9 na 72! Anyi nwekwara ndi otu ndi anaghị eri anụ na ndi anaghị eri anụ. Ndị ọrụ eTour hụrụ na echebara ihe anyị na-eri echiche. Nhọrọ ụlọ nkwari akụ n'obodo niile nke 3 - Seoul, Gyeongju na Busan dị ezigbo mma ma gboo mkpa anyị.
Anyị ji obi ụtọ na-akwado eTour maka onye ọ bụla na-eme atụmatụ njem Korea!
Mụ na nwunye m alọghachitela na Sydney mgbe ụbọchị ọnụnọ 10 na Korea nọ na ụbọchị 7 nọ na ngwugwu njem gị.
Ọ ga-amasị m igosipụta ndị ọrụ niile ekele m (Leo, Tommy, Mr Kim) na ọkachasị Yoona maka ọrụ ha na
Na-echebara echiche Ha mere ka njem anyị na Korea bụrụ ihe na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ Ha mere ka anyị nwee mmetụta dị ka ọ bụrụ na anyị bụ ndị amara ogologo oge ma mee ka anyị nwee ahụ iru ala, nwee nchebe ma lekọta anyị n'ezie, anyị ga-enweta ọrụ gị ma ọ bụrụ na anyị na-eme atụmatụ ileta Korea ọzọ na anyị ga-akwado gị
ndị enyi anyị chọrọ ileta Korea.
Ekele dịrị gị ọzọ, ka ụlọ ọrụ gị wee nweta ihe ịga nke ọma Kamsahamnida !!
Abatala m ahụike nke ọma Na mbu, aga m achọ ikwu nnukwu ekele maka gị na ndị ọrụ ibe gị niile n'inye m ọmarịcha njem nlegharị anya a Onye ndu gị na onye na-anya bọs bụ ọkachamara na enyi na enwere m ọ enjoyedụ nke ukwuu na njem ahụ ga-akwadoro njem gị nye onye ọ bụla nke na-aga n’oge ọzọ.
Daalụ maka ịhazi ụlọ niile na njegharị ~ !!
Ikpeazụ 25 Disemba, ezinụlọ Mr XickX Hong Mazị Vickstone Hong bịara na njem nlegharị anya otu ụbọchị nke Otu Day.
Obi dị anyị ụtọ na anyị nwere otu onye a maara nke ukwuu na onye ntụgharị njem nlegharị anya, anyị mụtara ọtụtụ ihe banyere South Korea na mkparịta ụka dị mkpirikpi ahụ Mr Hong nwere ikike nke eserese kacha mma maka obodo gị, na ndị nlegharị anya ga-enwerịrị ileta 'Seoul' nke Esia '
Toro ya ekele, ma kelee eTour maka inwe Mr Hong n’ime ụlọ ọrụ ahụ
Na nnọchite Bank Simpanan National na ndị mmeri nke Cuti-Cuti BSN, anyị ga-achọ ohere a iji kelee gị maka ọrụ gị dị mma ka ị na-eduzi njem anyị site na Korea.
You gụrụ akwụkwọ nke ukwuu ma mara ihe banyere mgbagwoju anya nke ogologo Korea, nke anyị ji ekele maka mbọ ị na-ebubata banyere ihe ọmụma banyere gị na ịnụ ọkụ n’obi Korea maka anyị Nke kachasị mkpa, ị bụ nwoke dị nwayọ ma nwee amara nke nwere ezigbo echiche na ezi echiche. ihe ọchị nke na-eme ka njem ahụ bụrụ nke na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ.
Ọzọkwa, na-ekele gị maka nlekọta ọma gị banyere anyị ụbọchị ndị a gara aga 5, anyị ga-eziga ndị otu ahụ site n'oge ruo n'oge site na ọrụ gị Ọzọkwa, a ga-atụ gị anya na ndị mmekọ anyị !!!
Ire anya ihu Gi na Seoul n’abia: D
daalụ nke ukwuu maka nkwado gị gbasara ndị otu m nke 7 !!
Ndị ahịa m erutere n'ụlọ n'enweghị nsogbu na afọ ojuju ha na ọrụ niile dị na Korea ị nyere ha.
Karịsịa ha buliri elu ọrụ zuru oke nke onye njem gị Miss Mini.
Daalụ m ọzọ, ana m atụ anya mmekorita ọdịnihu ga-eme n'ọdịnihu 🙂 🙂
Anyị alaghachila Perth !! Anyị nwere oge ịtụnanya na Korea nwute anyị echefuola kpamkpam maka ụdị nyocha ahụ chọrọ mezue ma nyefee Eric na ụbọchị 6th.
Agbanyeghị, Emechara m ya ma lelee ya na ntinye.
Ọzọkwa, daalụ maka ọrụ dị mma ma hazie njem nleta mbụ anyị na korea!
Anyi choro ito Eric maka oru oma ya bu onye nleta anyi G’eme ka anyi mara ndi enyi anyi Otu ihe bara uru banyere njem a bu na anyi n’eme enyi n’uzo ma n’ezie na Eric aburula anyi ezi enyi.
Daalụ, anyị ga-ahụkwa gị na korea ọzọ n’oge na-adịghị anya!
Caroline na Eric Meyer
Mụ na Eric lọtara Korea n'abalị a Anyị hụrụ ya n'anya
Ihe niile gara nke ọma mana anyị nwere mmasị na ntụzịaka anyị niile, Rebecca, Jessica, Korean Eric na onye ndu anyị Jeju Lowell
Ndị ọkwọ ụgbọala ahụ na-abịakarị n'oge ma ọ bụ n'isi ma dị mfe ịchọta hotelslọ ndị njem dị ka akọwara.
Daalụ maka ihe niile!
Anyị nwere ọmarịcha oge na Busan Thomas, onye ntụgharị njem nlegharị anya anyị, dị mma n'ihi nhazi nke egwuregwu baseball na ndị enyi anyị ka nọ n'ụgbọ ahụ, anyị jụrụ ka anyị ghara ịme mmemme ahụ n'ehihie Mọnde n'ihi na ọ ga-abụ ebe dị anya. ma ike gwụchara anyị nke ukwuu kama ọ kpọgara anyị nnukwu ụlọ ahịa dịka anyị siri jụọ ya O mere nyocha wee chọta ụlọ ahịa anyị na-achọ Ọ rụrụ nnukwu ọrụ ịtụ ihe oriri n'ụlọ oriri na ọ andụ andụ ha ma edozikwa anyị oge niile! !!! XD
Ọ ga-amasị m ịkele Jon maka ilekọta m na Satọdee 10th nke Septemba Ọ zuru ozi gbasara agwaetiti a mara mma nke bụ Jeju Ọ ghọtara mkpa m ma nyere m ihe m na-achọ na enweghị m mmasị na ebe ngosi nka, ebe nkiri adọta mmasị, mgbe m hụrụ n'anya okike na nri Jon mere m ka m nwaa ofe ọkụkọ na a reataurant mpaghara site na-eme njem nleta nke bụ ego.
Oge m ga-alọghachi Jeju (enwere ọtụtụ ihe ị na-eleta), aga m arịọ Jon ka ọ bụ ezigbo nwa bekee ma jisie ike wee gboo mkpa m niile !!
Daybọchị ọma m ga-achọ inye ntụgharị maka ekele maka Njem Korea m site na 19th-23rd Nov 2016!
Onye na-akwọ ụgbọala / onye na-eduzi anyị bụ Mr Thomas Kim, mara mma nke ukwuu, na-abịa n'oge, enweghị nsogbu, Onye na-asụ Bekee na-eme ka anyị nwee ahụ iru ala Ọ maara ma na-agbanwe agbanwe Anyị bụ ndị otu ndị enyi 3, enweghị ike ịsụ asụsụ Korea ọ bụla. Thomas Kim kacha mma ịkọwa na igosi anyị gburugburu Ihe kacha mkpa bụ na ọ na-agba mbọ mgbe niile na nchekwa anyị (anyị, ụmụ nwanyị 3) ga-ebu ụzọ kelee ya maka anyị.
Nke ikpeazu mana ekelela m maka ịdị na-anabata ebe a, azịza niile a na-enye ya na maka inye anyị ọrụ kacha mma iji hụ na njem anyị na-aga nke ọma.
Ana m ekele gị nke ukwuu maka ịme njem anyị ka ọ bụrụ nke na-amị mkpụrụ ma dịkwa ụtọ! 😀
Ndewo Jay, ndo maka ozi mbubreyo, aga m achọ ikele gị na ndị otu gị maka enyemaka na enyemaka ha dị ukwuu. Anyị nọrọ oge dị egwu na Jeju, ọ ga-apụtakwa na anyị ga-anọ n'ezie na Seoul na-enwe ụbọchị mmiri ozuzo ahah JEJU bụ ebe dị ịtụnanya nke na-echetara m obodo m bụ Reunion agwaetiti Anyị nwere ọ happyụ oge mụ na onye ọkwọ ụgbọ ala mụ na Baek, onye ọkachamara na effivcient Ma gị Mister Jay ndị ozi ịntanetị ahụ mezuru kwesịrị ka m sọpụrụ m na ekele m maka ịrụ ọrụ na China kemgbe afọ 5 gara aga, ọ mara mma nke ukwuu ma dịkwa egwu izute ya na nsọpụrụ, ịmụmụ ọnụ ọchị, ndị na-enye aka na Korea, ọ gbanwere ọtụtụ ihe site na China ahah MT Hallasan siri ike na njedebe, anyị mere ngwa ngwa, anyị akwa ụta na anyị ahụghị ọdọ ahụ n'ihi ihu igwe, anyị nwetụrụ mgbu ma o kwesịrị
Chọrọ gị na ndị otu gị niile kachasị mma 🙂
Ọ ga-amasị m ikele gị na ọkachasị onye ndu anyị, Stephan Lee, maka ịgọnahụ njem ezinụlọ m nke mbụ na South Korea anyị agaghị echefu echefu Anyị nwere obi ụtọ na ọmarịcha ọrụ enyere anyị na ndidi Stephan na anyị nwere na nka na ọrụ ya na-ekpo ọkụ na-eme ka ihe dịrị anyị mma ahụmịhe Anyị Obi dị ụtọ ịgwa gị na anyị nwere snow mgbe anyị nọ na Seoul, n’ụbọchị anyị 4 nke Thelọ ọrụ ntụgharị ọdụ ụgbọ elu (ụzọ abụọ ahụ) bụkwa ọkachamara ma nwee ọ andụ.
Aga m ekwughachi ụlọ ọrụ njem gị ọzọ ka onye ọ bụla n’ezinụlọ m, ndị enyi
Nwee ekele na ekele m ozo !!
Sid & Amy Rastogi ekwu, sị:
2018 년 November 21 일 na 6: 21 pm
Nwere ọmarịcha ezumike South Korea nke eTour haziri. Site na Incheon ruo mgbe anyị laghachiri na Incheon 9 ụbọchị ka e mechara, ndị ọrụ niile nke eTour lekọtara anyị nke ọma. Vzọ ndị a na-eji eme ihe maka ebe a na-ebugharị ya na njem dị ọcha ma dị mma. Ndị ọkwọ ụgbọ ala ahụ na-akwanyere anyị ùgwù ma mee ka anyị nwee nchebe nke ọma site na njem ha na ịnya ụgbọ ala ha pụrụ iche. A gọziri agọzi anyị inwe Kevin dịka onye ndu anyị na Seoul na Nick dịka onye ndu anyị na Gyeongju na Busan. N’ihe niile a na-eme njem ahụ, Joy nọgidere na-ezite anyị ma na-eleru anyị anya iji mata otú anyị si eme. Ọ alsoụ Joy chọpụtakwara na a na-agwa anyị ihe niile banyere ụbọchị ọ bụla nakwa na anyị anaghị agbaghara ụgbọ oloko anyị ma mara ebe anyị ga-ezute ndị ọrụ.
Aha * Email * Weebụsaịtị